OIML Fekitori - China OIML Vagadziri, Vatengesi
Heavy-basa CAST-IRON M1 zviyero 100kg kusvika 5000 kg (rectangular chimiro)
Inorema huremu huremu OIML F2 Rectangular chimiro, yakapetwa simbi isina simbi uye chrome yakafukidzwa simbi
Jiajia inorema inorema rectangular zviyero zvakagadzirirwa kuona yakachengeteka uye inoshanda mashandiro ekuita, ichivaita iwo mhinduro kwayo yekudzokorora calibration maitiro. Zviyereso zvinogadzirwa zvinoenderana neOIML-R111 zviyero zvezvinhu, mamiriro ezvinhu, kuwanda, uye magineti, izvi zvinorema sarudzo yakasarudzika yezviyero zvema laboratories neNational Institutes.
Investment ichikanda zviyero zvemhangura OIML F2 Rectangular chimiro, yakapetwa simbi isina simbi
Zviyero zvakaenzana zvinobvumidza kuchengetedzwa kwakachengeteka uye zvinowanikwa mumazita ezvinokosha e1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg uye 20 kg, zvinogutsa zvikanganiso zvinotenderwa zveOIML kirasi F1. Aya masimbi akakwenenzverwa anovimbisa kugadzikana kwakanyanya pamusoro pehupenyu hwayo hwese. Aya zviyereso ndiyo mhinduro kwayo yekushambidza-pasi kunyorera uye nekuchenesa kushandisa kamuri mumaindasitiri ese.
Zvayera zvakaenzana OIML M1 Rectangular chimiro, kudivi kugadzirisa mhango, kukanda simbi
Yedu simbi yesimbi inorema inogadzirwa zvinoenderana neInternational Recommendation OIML R111 maererano nezvinhu, pamusoro pekuomarara, density uye magnetism. Iyo miviri-yezvinhu kupfeka inovhenekera yakatsetseka nzvimbo isina kutsemuka, makomba nemakona akapinza. Kurema kwega kwega kune mhango yekugadzirisa.
Zvayera zvakaenzana OIML M1 Rectangular chimiro, kumusoro kugadzirisa mhango, simbi yakakandwa
Zvayera zvakaremara OIML M1 Rectangular chimiro, yakapetwa simbi isina simbi
Zviyero zvakaremarara OIML F2 Rectangular chimiro, simbi isina kuchena
Calibration Zviyero zveDhijitari Scales, Sheuri Beam Load Cell, Certified Weights, Kuyera Kurema Set, Scale Kuchengetedza Kurema, Kuchengeta Misa,